Kooxda Arsenal oo shaacisay Lambarka cusub ee uu u xiran doono xiddigeeda Thomas Partey – Gool FM
Kooxda Arsenal oo shaacisay Lambarka cusub ee uu u xiran doono xiddigeeda Thomas Partey
Haaruun June 30, 2021
(London) 30 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa shaacisay lambarka uu u qaadan doono ciyaaryahankeeda Thomas Partey xilli ciyaareedka soo socda.
Thomas Partey ayaa doortay inuu kooxda Arsenal u xirto lambarka uu aadka jecel yahay ee 5-aad xilli ciyaareedka soo saaddan ee horyaalka Premier League 2021/22.
Xiddiga xulka qaranka Ghana ayaa Gunners metelaya xilli ciyaareedkiisii labaad kaddib markii uu 45 milyan oo gini kaga soo dhaqaaqay Kooxda Atletico Madrid bisii October.
Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Partey wuxuu xirtay lambarka 18-aad, laakiin wuxuu aad u xiiseynayay inuu u beddesho nambarkiisa shanaad ee uu u arko inuu u yahay nasiib.
Arsenal ayaa xaqiijisay in Partey uu u xiran doono lambarka 5-aad xilli ciyaareedka soo socda.
Isagoo la hadlayay Website-ka Kooxda Arsenal waxa uu yiri: “Waan jeclahay lambarka 5-aad, maxaa yeelay waa mid ka mid ah lambarrada ugu muhiimsan kooxda, sidoo kalena waa lambar nasiib ii leh.
“Waa lambarkii aan xirtay sanadihii la soo dhaafay, marka aniga ahaan waa mid ka mid ah lambarrada iigu fiican.” ayuu hadalkiisa ku daray Partey.
Lambarkaan caanka ah ee 5-aad waxaa hore ugu soo xirtay kooxda xiddigo ay ku jiraan Steve Bould, Kolo Toure iyo Thomas Vermaelen.
Markii Partey uu ku biiray naadiga, funaanadda lambarka 5-aad waxaa watay daafaca dhexe ee reer Greek, Sokratis Papastathopoulos, laakiin kaddib markii labo xilli ciyaareed iyo bar uu joogay kooxda, qandaraaska daafaca ayaa laga joojiyay.
Taasi waxay u fasaxday Partey inuu dhabarka dambe ee maaliyaddiisa ku qaato lambarkiisa nasiibkiisa ah ee 5-aad.
Partey wuxuu markiisii ​​ugu horreysay xirtay maaliyadda lambarka 5-aad sanadkii 2013-kii, halka amaah uu kula joogay Mallorca kana soo tagay Kooxda Atletico Madrid.
Markii hore lambarka 22-aad ayay siiyay Atletico Madrid, laakiin markii dambe wuxuu u beddeshay lambarka 5-aad sanadkii 2017-kii, maadaama uu si joogto ah uga mid noqday kooxda Macallin Diego Simeone.
2021/22 x Arsenal#TP5 | @Thomaspartey22
Toni Kroos oo qarka u saaran inuu ka fiirsto Xulka qaranka Jarmalka... (Ma dhabbaa inuu ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey ee Xulkiisa?)
Maxay tahay sababta uusan Karim Benzema mar walba ugu dhawaaqin Erayada Heesta Calanka Faransiiska!?